यस्ता छन्,यौन सम्वन्धी अनौठा तथ्यहरु !
ड्युरेक्स फेस अफ ग्लोबल सेक्स सर्वेका क्रममा केहि अविश्वसनिय र विचित्र तथ्य वाहिर आएको छ । कुन देशका महिलारपुरुषले कुन उमेरमा आफ्नो कौमार्य भंग गर्छन्, वर्षमा कतिपटक यौन सम्वन्ध राख्छन्, यौन जीवनवाट कति सन्तुष्ट छन् जस्ता यौन प्रवृत्ति सम्वन्धिका यावत विषयमा सर्वेले नयाँ तथ्य उजागर गरेको हो । यसमा २६ देशका २७ हजार भन्दा वढीको सहभागिता थियो ।
सर्वे अनुसार ब्राजिलका युवायुवती अन्य देशको तुलनामा सवैभन्दा पहिला आफ्नो कौमार्य गुमाउँछन् । उक्त देशमा सेक्स गर्ने युवा युवतीको औसत उमेर करिव १७ वर्ष पाइएको छ ।
यस्तै अष्ट्रेलियामा, अमेरिका, फ्रान्स र व्रिटेनका युवायुवतीले औसत १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो कौमार्य भंग गर्ने पाइएको छ । मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, इटली, स्पेनका युवायुवतीले १९ वर्षमा र सिंगापुर, भारत, जापानका युवायुवतीले २० देखि २२ वर्षको उमेरमा पहिलो सम्वन्ध राख्ने गरेका सर्वेमा उल्लेख छ ।
युरोपियन मुलुकको तुलनामा एशियाली महिलाको सेक्स पार्टनर कम हुने गरेको छ । दक्षिण अफ्रिका, इटली, फ्रान्स र स्पेनका महिलाहरुले आफ्ना जीवनकालमा ४ देखि ७ जनासँग यौन सम्वन्ध स्थापित गर्ने पाइएको छ । जर्मनमा यो संख्या १० र ब्रिटेनमा ११ छ । अष्ट्रेलियामा एक महिलाको औसत १२ जना सेक्स पार्टनर हुने गरेको छ । ब्राजिलमा यो संख्या १३ र मेक्सिकोमा १४ सम्म हुने गरेको तथ्य वाहिर आएको छ ।
यस्तै पुरुषको सन्दर्भमा भारतका एक पुरुषले आफ्नो जीवनभरीमा औसत ३ जना महिलासँग यौन सम्वन्ध राख्छन् । यस्तै, मेक्सिकोका पुरुषले ६ देखि ११ जनासम्म यस्तो सम्वन्ध वनाउने गरेका छन् ।
सिंगापुरमा यो संख्या ८ देखि १२ सम्म र अमेरिकामा औसत १३ जनासम्म छ । जापानका पुरुषले १४ र व्रिटेनका पुरुषले १५ जनासम्म यौन सम्वन्ध राख्ने पाइन्छ । जर्मनमा एक पुरुषको १६ जना सेक्स पार्टनर हुन सक्छन् भने फ्रान्समा १२ र दक्षिण अफ्रिकामा १८ जना हुने गरेको छ ।
इटलीमा एक पुरुषले १९ जनासम्म यौन सम्वन्ध राख्ने पाइएको छ भने स्पेनमा यो संख्या २० देखिएको छ । अष्ट्रेलियाका पुरुषले २१ देखि २५ जनासम्म सेक्स पार्टनर राख्ने गरेका छन् । ब्राजिलमा एक पुरुषले २२ देखि २७ जनासम्म यौन सम्वन्ध राख्ने गरेका छन् ।
कुन देशकाले कति पटक सम्बन्ध
कुन देशका नागरिकले एक वर्षमा कतिपटक यौन सम्वन्ध राख्छन् होला रु यस सम्वन्धमा पनि सोधपुछ गरिएको थियो । जस अन्र्तगत ब्राजिलका नागरिकले एक वर्षमा औसत १ सय ४५ पटक यौन सम्वन्ध राख्छन् । भारतकाले औसत १ सय ३० र मेक्सिका नागरिकले १ सय २३ पटक यौन सम्वन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ ।
फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकाका नागरिकले वर्षमा औसत १ सय २० पटक यौन सम्वन्ध राख्ने गरेका छन् भने स्पेनमा यो संख्या १ सय १८ र जर्मनमा १ सय १७ छ । यस्तै, अष्ट्रेलियाका नागरिकले वर्षमा औसत १ सय ५ पटक र ब्रिटेनमा ९५ पटक यौन सम्वन्ध राख्ने वताइएको छ । सिंगारपुर र अमेरिकामा यो संख्या क्रमश ८५ छ भने जापनमा ४८ पटक राख्ने गरिएको छ ।
यौन सम्बन्धलाई कति सयम ?
सर्वेले यो तथ्य पनि उजागर गरेको छ कि, कुन देशको नागरिकले संभोगका लागि कति समय लिन्छन् । यो गणना मिनेटमा गरिएको छ । यसमा सवैभन्दा छरितो भारतियहरु देखिएको छ । उनीहरुले सम्भोगका क्रममा औसत १३ मिनेट २ सेकेन्ड समय लिने गरेका छन् । फ्रान्सका नागरिकले १४ मिनेट ६ सेकेन्ड र सिंगापुरका नागरिकले १५ मिनेट लिने गरेका छ । यस्तै स्पेनकाले १५ मिनेट, जापनका र व्रिटेनकाले १६ मिनेट संभोगका लागि खर्चने देखिएको छ । अष्ट्रेलियाका नागरिकले औसत १७ मिनेट लगाउने गरेका छन् । यस कामका लागि जर्मन, अमेरिका नागरिकले १७ मिनेट लगाउने गरेका छन् । यस्तै, दक्षिण अफ्रिका, इटली, ब्राजिल र मेक्सिकोका नागरिकले औसत २० देखि २२ मिनेट लगाउँछन् ।
संतुष्टि कति ?
यौन सम्वन्धवाट उनीहरु कति सन्तुष्ट होलान् रु जवाफ मिश्रित देखियो । यस सन्दर्भमा मेक्सिकोका नागरिक सवैभन्दा अगाडि छन् । उक्त मुलुकका ८३ प्रतिशत नागरिक आफ्ना यौन जीवनवाट सन्तुष्ट रहेको पाइयो । यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका ५० प्रतिशत र अमेरिककाका ४८ प्रतिशतले यौन सन्तुष्टि लिएको वताए । भारतमा यौन जीवनवाट सन्तुष्ट प्राप्त गर्नेको संख्या ६१ प्रतिशत छ । स्पेनमा ४९, अष्ट्रेलियामा ४२ र ब्रिटेनमा ४० प्रतिशतले यौनवाट सन्तुष्टि लिएको वताए ।